Chap For Men 18ml – SUNNY eSTORE
Chap For Men 18ml
TroposphereSKU: PF-TROP-1-323 (S016)
A low-cost but High-Quality perfume. This smell indeed fresh and cleaning you can feel it everyday.
တစ်နေ့တာလုံး လုပ်ငန်းခွင်မှာ စမတ်ကျကျနှင့် ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်အဝပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ကိုယ်သင်းနံ့ရရှိစေသော Troposphere ရဲ့ CHAP ရေမွှေးလေးကတော့ Modern & Classic Style ပေါင်းစပ် ဖွဲ့စည်းထားတာ ဖြစ်ပြီး 1920 နှင့် 2020 ခေတ် Mix-smell အငွေ့အသက်ကို ရရှိစေပါတယ်။
စူးရှရှရနံမျိုးမဟုတ်ဘဲ အနံ့လေးခံစားမိရုံနဲ့ လူကြီးလူငယ်မရွေး အေးမြကြည်လင်စေမယ့် ကိုယ်သင်းနံ့လေးဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ နုပျိုသစ်လွင်မှု၊ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစေမှု၊ တက်ကြွလန်းဆန်းစေမှုများနှင့် လက်တစ်ကမ်းအကွာမှ စွဲဆောင်မှုရှိစေမယ့် Troposphere ရဲ့ CHAP လေးကို Smart ကျတဲ့ လူငယ်တွေအကြိုက်ဖြစ်စေမှာပါ။ တစ်နေ့တာလုံးလွတ်လပ်ပေါ့ပါးမှုများနှင့် နွေးထွေးကြည်လင်စေမယ့် ဘယ်ပဲသွားသွားယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရရှိစေမယ့် Man Power Perfume ပဲဖစ်ပါတယ်။
Troposphere ရဲ့ထူးခြားချက်လေးကတော့ Global Brand များ၏ရနံအတိုင်း 100% Coverage ရရှိအောင် ဖန်တီးထားသော ကြောင့် Luxury Premium Perfume တစ်ခုအနေဖြင့် ဖော်စပ်ထားတာဖြစ်လို့ ရေမွှေးချစ်သူများတွက် စိတ်ကျေနပ်မှာအပြည့်အဝ ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။
Includes: 1 bottle of CHAP for Men (18ml)